Global Voices teny Malagasy » African music (#6) · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Mey 2019 7:30 GMT 1	 · Mpanoratra Obi Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Mainty, Afrika Atsimo, Cap Vert, Cote d'Ivoire, Etiopia, Kamerona, Kenyà, Oganda, R.D. Kongo, Senegal, Tanzania, Mediam-bahoaka, Mozika, Zavakanto & Kolontsaina
Coupé-Décalé? Tsy nahita ambara aho rehefa nanontany ahy ilay vehivavy namako, Tchi, raha mba mahafantatra momba ny Coupé-Décalé. Fampidirana iray ao amin'ny wiki momba ny Coupé-Décalé  no mitondra fanazavana fohy.
“Ny Coupé-Decalé noforonin'i Doucoure nandritra ny olana ara-politika sy ara-tafika tao Cote d'Ivoire, dia fanehoana ny hetahetan'ireo tanora Ivoariàna. Gadona tena mamelovelo ny Coupé-Decalé ary santionany afrikàna tena mandona, feo beso lalina, mihetsiketsika ary tena tsara rindra. Miavaka izy. Ny Coupé-Decalé dia miresaka hasambarana, milaza ny andavanandrom-piainana ao anaty fiarahamonina ivoariàna, sady koa nanome topimaso momba ny toedraharaha politika tao amin'ny firenena. Ireo mpanakanto malaza mpiangaly ny Coupé-Decalé: Sagacite (Doucoure), DJ Brico, DJ Arsenal, Papa Ministre miaraka amin'ilay hirany malaza “Coupé-Decalé Sinoa”, ary mpanakanto ivoariàna maro manantalenta.”
Nanao fikarohana bilaogy nalakilaky aho izay nahazoana vokatra marobe saingy tamin'ny teny frantsay daholo!! Tsapako indraindray ny hadisoam-panantenana .Eo ny lafiny iray hoe tsy fahaizako ilay teny nanoratana ny tononkira (tsy dia olana goavana loatra satria ny gadon'ilay mozika no tena mitàna anjara toerana betsaka) ary iray hafa ny maha-tsy mpiondana loatra ny hetsika mozikaly iray goavana, vokatry ny sakana ara-teny. Toy izay fitenin'ireo Frantsay hoe “C'est la vie” (Fiainana izany). Antsoin'ireo fampianarana fiteny rehefa fotoampahavaratra hoe antso torolàlana. Tongasoa ato anatin'ny Fitetezana ny mozika Afrikàna ianao.
Hans avy ao amin'ny Powershot  no mitondra fijery tsara momba ilay fetibe vao haingana WOMAD  natao tao Adelaide, Aostralia tamin'ny Martsa. Nomarihany ireo fiakarana an-tsehatra maro nataon'ny Afrikàna tao amin'ilay fetibe:
Alasarona ilay seho faharoa, tanaty orana ny andro Alahady, nataon'i Lura , “Cape Verdean  mpihira. Toa nifanaraka tsara tamin'ny ampaham-potoana farany natao ho azy ny fandihiny midoladola sy ny fiangaliny ny feony, nampiseho ireo endrika samihafa ananan'ny mozika avy any Cape Verde, miainga avy any amin'ny gadona milamindamina mankany amin'ny funk mafàna.”
Avy eo tohizany amin'ny hoe:
Ny mozika Soukous  fampandihizan'ilay Kongoley “Kanda Bongo Man s no nanokatra ny varavarana ho an'ny swing be voninahitra misy dindo aingam-panahy Kiobàna, nataon'ilay Orchestra Baobab  manana ny lazany avy any Senegal izay nitazona gadona groove malefaka, manintona ary feno hafaliana. Ny fomba nilalaovan'izy ireo ny Coumba, avy amin'ilay CD Choice klasika an'ny Pirates, nohiraina tamin'ny fomba maharavoravo.”
Rohy mankany amin'ny bilaogin'i Steve Ntwiga Mugiri  avy eo no azo (isaorana i Sokari ) ary ny fampidirana farany avy aminy dia manome rohy misy mp3 iray mankany amin'ny Marina (sady manoratra aho eto no mihaino ihany), hiran'i Samba Mapangala . Manoratra bilaogy i Steve iresahany momba an'i Kenya, Afrika, ny mozika ary “ny tontolo misy antsika”. Raisiny ihany koa ireo fangatahana mp3 hampifandrohizina amin'ny bilaoginy, koa tsidiho ary dia mandraisa anjara amin'ny fety àry e.
Soul on Ice  milaza momba ny fodiamandrin'i Nelly, tsy ela akory izay, mpikambana mpanorina ny tarika Tanzaniàna mpiangaly hiphop “X Plastaz”.
“Tamin'alaelo lehibe no namakiako momba ny nahalasànan'i Faza. Tamin'ny alàlan'ny africanhiphop.com no nahitako ny feon'ny X Plastaz ary izy no nampiditra ahy tamin'ilay sombina hiphop afrikàna tatsinanana fantatra ihany koa amin'ny hoe Bongo Flava. Tany amboalohany, ny hevitra Mpiady Masai mametraka ny fihetsehampony sy ny zavatsarotra iainan-dry zareo any an-tanandehibe manjelanjelatra dia toy ny manadala, saingy rehefa nahita lahatsary vitsivitsy aho ary nandre hira vitsivitsy dia talanjona. Hitako ny momba azy ireo ary namaky ny momba ilay tarika aho.”
Tsidiho ny tranokalan- dry zareo ary mba asio sonia ilay boky fisaonana. Mandria am-piadànana
Red Ruin  nanangona lisitra mp3 misy ireo hira hiphop erantany, nanasongadinana ny hira iray an'i X Plastaz , “Nini dhambi kwa mwenye dhiki“:
“Tato anatin'ny taona vitsivitsy, lasa fantatra ny X Plastaz amin'ny maha-tarika voalohany azy mpiangaly hiphop mampiasa ny mozika sy kolontsaina Maasai amin'ny seho ataony. Mpihira Maasai i Yamat (fantatra koa amin'ny hoe Merege), mpikambana feno amin'izao fotoana izao ao anatin'ilay tarika, tonga nanatevin-daharana tamin'ireo fitetezam-paritra sy fandraketana feo tany amin'ny studio.”
Manome fandikàna mahaliana momba ny fandaharana ireo mozika afrikàna i Soi Disantra :
“Ny zavatra faharoa tsikaritro: tsy tena misy “ny mozika afrikàna”, farafaharatsiny araka izay nisaintsainako azy tamin'ny ankapobeny. Tsy midika akory izay fa milaza aho hoe tsy misy gadona mozika avy ao Afrika; misy fa tsy io. Na hoe miezaka aho milaza fa tsy afaka ny ho mpamaritra tsy mitanila sy mahalaza azy tsara ny “Afrikàna” – “Afropop,” no heveriko fa fanasokajiana iray midadasika tsara. Ny tiako hambara dia somary badobado ihany ny fandraisana tanibe iray navadika ho mozika manankarena, mahatalanjona sy, raha azoko lazaina, marolafy, sy eritreretiko hoe mitovitovy daholo ny zavatra rehetra. Tsy mbalax ny gadona Soukous, sady tsy afro-funk , tsy rumba, tsy Ethio-jazz, tsy Afrobeat, ary azo antoka ho tsy iray amin'ireo mozika marobe nentindrazana na mozikana foko. Ohatra: na dia samy endrika mozika tandrefana sy mifanakaiky aza, tsy Merseybeat ny Metal.”
Lovely Amphibian  miresaka momba ilay Ogandey mpanakanto Ragga Dee  nandrombaka ny Loka Perlan'ny Mozika ao Afrika  ho an'ny mpanakanto Ragga tsara indrindra ho an'ny taona 2005:
“Mba hanomezana tondro momba ny maha-monamonaina an”ilay hetsika, ingahy rainy izy tenany mihitsy, rehefa nanaiky ilay loka, no niteny hoe tokony nofoanan'ireo mpikarakara ny sokajy ‘mpanakanto raga ho an'ny taona’, na tsaratsara kokoa noho izay raha nomena anarana hafa ilay izy, Loka Ragga Dee.”
Moistworks  niverina nijery tahirinkira vitsivitsy an'ilay Afrikàna Tatsimo mpiangaly gadona Jazz, Johnny Dyani . Momba ilay hira “Song for Biko” dia manoratra izy hoe:
“Fantatrareo tsara fa eny amin'ny ankamaroan'ireo kapila manjelatra, tsy mendrika ny hohainoana akory ilay lazaina fa hira fanomezana – fandraisampeo izay vetivety dia nialàna noho ny antony mibaribary sy mihanjahanja ve? Izao e, amin'ity tranga ity, ny hira tsara indrindra no natao hira fanomezana: ny lava, mizara ho ampahany roa “Lonely Flower in the Village.” Ny feo beso mahaliana ataon'i Dyani no manomboka azy. Ny hany ilainao dia ny mihaino naoty roa mba handrenesana hoe goavana amin'ny fitendrena gitara beso izy.”
Mosistworks manohy amin'ny “Witchdoctor's Son” (zanaka mpamosavy) sy “Good News from Africa” (Vaovao tsara avy ao Afrika). Omeny ihany koa ireo rohy mankany aminà mp3 misy ireo hira naverina nodinihana. Lafatra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/05/14/138332/
 Cape Verdean: http://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Verde
 Orchestra Baobab: http://www.bbc.co.uk/music/profiles/orchestrabaobab.shtml
 Steve Ntwiga Mugiri: http://ntwiga.net/blog/
 Soul on Ice: http://obifromsouthlondon.blogspot.com/2006/04/fried-rice.html
 Red Ruin: http://www.redruin.com/2006/02/24/international-hip-hop-expostravagasplosion-part-i/
 Soi Disantra: http://soidisantra.typepad.com/soi_disantra/2005/11/afroshow_rundow.html
 Lovely Amphibian: http://febdimencionzx.blogspot.com/2005/12/what-is-ragga-dee-singing.html
 Ragga Dee: http://www.musicuganda.com/indartist/Raga%20Dee.htm
 Loka Perlan'ny Mozika ao Afrika: http://pamawards.com/index.php?option=content&task=view&id=2&Itemid=25
 Johnny Dyani: http://en.wikipedia.org/wiki/Johnny_Dyani